metacafe ကြည်မယ် — MYSTERY ZILLION
January 2009 edited April 2009 in Other
အကိုတို့ရေ.... ကျွန်တော်...metacafe video တွေကိုကြည့်ချင်လို့ metacafe pro 1.3.31 ကို download လုပ်ပါတယ် ဘယ်လိုမှ download လုပ်လို့မရပါ....ဒါနဲ့ ရှိပြီးသား version 1.2 လေးနဲ့ download ဆွဲတယ်... မရတာများပါတယ်...download ဆွဲလို့ ရပြန်ရင်လဲ ကြည်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်...ပြီးတော့ metacafe က တောင်းဆိုထားတဲ့ directX9နဲ့ window media player လည်း ကျွန်တော့် ဆက်ထဲမှာ ရှိရဲ့သားနဲ့ metacafe ကို ကြည့်လို့မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်....အကြံကောင်း...ဉာဏ်ကောင်းလေးများရှိရင် ဝေငှပါဦးဗျာ....
ဒါပေမယ့် register လုပ်လို.မရဘူးခင်ဗျ
ကျွန်တော် အခုတင်ထားတာတော့ MetacafeSetup1.3.31.0.r ပဲ ... ကျွန်တော်တော့ တင်ပေးထားလိုက်မယ်နော် ... File size ကတော့ 7.16 MB ရှိတယ် ... သူ့၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ဒေါင်းကြည့်ပါလား ... ညဘက်လောက်ကျမှ ဆွဲကြည့်ပေါ့ ... ကွန်နက်ရှင်နဲ့လည်း ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ် ... လူတိုင်းကို အလကားပေးနေတာပဲကို ...
register ကိုကျတော့ ကျွန်တော် New Account ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပဲ ... အကိုက ကိုယ့်အကောင့်နဲ့ ထည့်ထားတာလား ... အခုထိတော့ ရနေတုန်းပဲ ... သူ့ဘာသာသူ ပေးနေတာပဲ ...
့ IE Settings (ဒါမှမဟုတ်) COntrol Panel -> Internet Settings (အတူတူပါပဲ)
မှာ Proxy ထည့်ပီးသွားပီလားဗျို့
MPT ယူဇာဆိုရင်တော့ မကြိုးစားနဲ့ဗျိုး.. ဘန်းထားတာ...
အရင်က Freegate လေးရှိတော့ အိုကေသေးတယ် အခုတော့ မရတော့ပါဘူး...
oasis wrote: »
ifile.it မှာ တင်ပေးလို့ရမလား Bro ...
4share က Access Denied ဖြစ်နေလို့ပါ။
ကို oasis ရေ....
အကို ပေးတဲ့ link ကို download ဆွဲပါတယ်...နောက်ပြီးတော့ run ပါတယ်..metacafe desktop ပေါ်ရောက်တော့ ဖွင့်ကြည့်ပါတယ်..new account ကိုရွေးပါတယ်...ပြီးတော့ error ကြည့်ပဲတက်နေပါတယ်....နည်းလမ်းလေးများ ရှိ၇င်ပေးပါဦး...
အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ် .... MetacafeSetup1.3.31.0.r ပြန်ချိန်းပြီး တင်ထားပေးပါတယ် .. အစ်ကိုရေ ...
Username နဲ့ password ကိစ္စကတော့ အဆင်ပြေသလို ထည့်ရင်လည်းရပါတယ် ခင်ဗျ ... အခု ကျွန်တော် စက် ၄ လုံး တောင် တင်ထားတာရပါတယ် ... ပထမတစ်ခါတင်တုန်းကတော့ Username နဲ့ Password ကို အမှန်အကန်ထည့်လိုက်တယ် .. အဲဒါလည်း ရတယ်ဗျ ... နောက် စက်တွေကျတော့ အဲဒီ Username နဲ့ Password ကို ထည့်တော့ မပေးတော့ဘူး .. အဲဒါနဲ့ New User Account ကို ပေးလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်ဗျ .. အခုအထိတော့ ... သူက New User Account ကို လုပ်ရင် နည်းနည်းတော့ စောင့်ရတယ် .. Error တက်စရာ အကြောင်းတော့ မရှိဘူးဗျ ..
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ အကို့ရဲ့ g-mail account ကို ထည့်ပေးလိုက်ကြည့်ပါလား ...
အပေါ်ကပြောတာအမှန်တွေမို ့Video ကြည့်မရတာဘဲပြောမယ်လေ
K-Lite Codec Pack ဆိူတာရှာInstall လုပ်ကြည့်ပါရပါလိမ့်မယ် FileHippo မှာရှာကြည့်
Me2ဗျ။
ကျနော်လဲ Error ပဲတက်နေတာ ...
Bro Oasis ပြောတဲ့အတိုင်းလဲ စမ်းကြည့်သေးတယ် .. တက်တာပဲဗျ။ :106:
@|[email protected] wrote: »
ဘာမှပူနဲ့ http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=2586 အဲဒီကိုသွားကြည့်လိုက်
အဲဒါကိုလောလောဆယ်၀င်လို့မရပါဘူး.....ပြီးတော့ ..new account လုပ်တာ ERROR တတ် ပါ တယ်။ တချို. ..MPT တွေကရ ပါတယ်...
ကျွန်တော် ကတော့အားလုံးတော့ရပါရဲ့ .. ဒါပေမယ့် getting new items ဆိုပြီးတော့ရပ်နေတယ် .. connection ကြောင့်ပဲထင်ပါတယ်ဗျာ .. ဒီတလောတော့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး ... အရေးထဲလာမယ့် ၁၇ ရက်နေ့ကြမှပြန်ကောင်းမယ်လို့ထပ်ပြောပြန်ပြီ .. လာမယ့် ၂၁ ရက်နေ့ဆို တစ်လပြည့်နေပြီ ... :2: :106: